ကျနော်တို့ ကားလောကမှာရှိတတ်ကြတဲ့ အယူအဆအမှားတွေထဲကတစ်ခုက အင်ဂျင်အအေးခံရည် Coolant နဲ့ပတ်သက်ပါတယ်။
“Coolant ဆိုတဲ့ဟာ သုံးစရာမလိုပါဘူးကွာ၊ ရေပဲထည့်ရပါတယ်။ အလကား ပိုက်ဆံပိုကုန်တယ်”
“Coolant ဆိုတာ အေးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ ရေမခဲအောင်သုံးတာ၊ ဂျပန်ကအေးလို့၊ မြန်မာနိုင်ငံက ပူတယ်။ ဒါကြောင့်သုံးစရာမလိုဘူး”
“Coolant ဆိုတာ ဒီအတိုင်းထည့်ရမှာလား၊ ရေရောသုံးရမှာလား”
“အနီကောင်းလား၊ အစိမ်းကောင်းလား၊ အပြာကောင်းလား၊ ဘာအရောင်ထည့်ရမှာလဲ?”
ဆိုပြီးအင်ဂျင်အအေးခံရည် Coolant နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမှားတွေရော အမှန်တွေရော အယူအဆ အမျိုးမျိုးတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
Coolant ဆိုတာ ကျနော်တို့လက်ရှိသုံးနေတဲ့ကားတိုင်းရဲ့ အင်ဂျင်အတွက်မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အရည်တစ်ခုပါ။ ဘာအတွက်လိုအပ်တာလဲဆိုရင်တော့ အင်ဂျင်အပူချိန်လွန်ကဲပြီး အင်ဂျင်နဲ့ဆက်စပ် အစိတ်အပိုင်းတွေ ပျက်စီးမှုကနေ ကာကွယ်ပေးထားတဲ့အအေးခံရည်မို့လို့ပါ။ ဟိုးအရင်ခေတ်ကားတွေမှာတော့ အင်ဂျင်အအေးခံရည် (Coolant) ကို အသုံးမပြုဘဲ ရိုးရိုးဘုံဘိုင်ရေကိုသာ အသုံးပြုခဲ့ကြတာပါ။ သို့ပေမဲ့ ရိုးရိုးဘုံဘိုင်ရေဟာ အင်ဂျင်အအေးပေးစနစ်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်တာမို့ ရေအစား Coolant တွေကို အစားထိုးအသုံးပြုလာကြတာပါ။
Coolant တွေကို အများအားဖြင့် Antifreeze လို့ ခေါ်ဝေါ်ကြပြီး Ethylene (or) Propylene Glycol ရယ်၊ ရေရယ်ကို ရောနှောထားတဲ့ အရောအနှောကိုခေါ်တာပါ။
Coolant တွေရဲ့ အားသာချက်တွေကတော့
ရေခဲမှတ် မြင့်ပါတယ်၊ ရိုးရိုးဘုံဘိုင်ရေတွေဟာ0ံC မှာ ရေခဲပေမဲ့ Coolant တွေဟာ0ံC မှာရေမခဲနိုင်ပါဘူး။ ရေခဲနိုင်တဲ့ အအေးပိုင်းဒေသတွေအတွက် ရေအစား Coolant ကို မဖြစ်မနေသုံးစွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Coolant တွေရဲ့ Antifreeze ကြောင့် Coolant တွေဟာ -37 ံC ထိရေမခဲနိုင်ပါဘူး။
ရေဆူမှတ်မြင့်ပါတယ်။ ရိုးရိုးရေတွေဟာ 100ံC မှာရေဆူပေမဲ့ Coolant တွေရဲ့ ရေဆူမှတ်ဟာ 100ံC အထက်မှာရှိပါတယ်။ စံသတ်မှတ်ချက်အရ 129°C အထိ ရေမဆူနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် တော်ရုံနဲ့ ရေမဆူ Heat မတက်နိုင်ပါဘူး။
သံချေးတက်စေခြင်း မရှိပါဘူး။ ရိုးရိုးရေတွေဟာ သတ္တုအင်ဂျင်၊ သံအင်ဂျင်တွေကို သံချေးတက်၊ သတ္တုချေးတက်ခြင်းတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပေမဲ့ ဒီ Coolant တွေကတော့ သံချေးတက်တာ၊ သတ္တုချေးတက်ခြင်းမှ ကင်းဝေးစေပါတယ်။
Heat Transfer လို့ခေါ်တဲ့ အပူကူးပြောင်းသယ်ဆောင်မှုကောင်းလို့ အင်ဂျင်အပူချိန်ကို သက်သာစေပါတယ်။
Coolant တွေကိုရေရောသုံးရမှာလား၊ ဒီအတိုင်းသုံးရမှာလား?
ယခုလက်ရှိ ကားလောကဈေးကွက်ထဲမှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်တဲ့ Coolant အမျိုးအစား ၂ မျိုးရှိပါတယ်။
Concentrate Type (အဆီရည်)
ဒီ Concentrate Type ဆိုတာကိုတော့ ဈေးကွက်ထဲမှာ အဆီရည်လို့ခေါ်ပြီး ဒီအတိုင်းအသုံးပြုလို့မရပါဘူး ရေရောပြီး အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ 50:50 အချိုးဖြစ်တဲ့ အဆီ ၁ ဆ၊ ရေ ၁ ဆ ရောနှောအသုံးပြုရမှာပါ။ ဝယ်ယူထားတဲ့ Coolant ဘူးမှာ Concentrate လို့ရေးထားရင် ရေရောသုံးရမှာဖြစ်ပြီး ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီက သတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့ အချိုးအစားအတိုင်း ( 40:60 , 30:70 , 50:50) အစရှိသဖြင့် ရေသန့်နဲ့ ရောနှောအသုံးပြုရမှာပါ။ Concentrate တွေကို ရေမရောဘဲ အသုံးပြုမိရင် အဆီရည်ရဲ့ပြင်းအားကြောင့် ရေတိုင်ကီတွေပေါက်တာ၊ ရေလည်အုံတွေပျက်တာ၊ သံအင်ဂျင်နဲ့ သတ္တုအင်ဂျင်တွေကိုပျက်စီးစေတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီ Pre-Mix Type ကတော့ ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေက သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းအတိုင်း ရေရောနှောပြီးသား အသင့်သုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုက်တဲ့ Coolant ဘူးမှာ Pre-Mix လို့ပါရင် ရေရောစရာမလိုဘဲ အသင့်သုံးစွဲနိုင်တာဖြစ်လို့ ထပ်မံရေရောလို့မရပါဘူး။ ထပ်မံရေရောလိုက်ရင် Coolant တွေရဲ့ Quality အရည်အသွေးမပြည့်မီတော့ဘဲ စံချိန်စံညွှန်းအတိုင်းအလုပ်လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
Coolant အရောင်တွေက ဘာတွေကို ဆိုလိုတာလဲ?
Green Antifreeze / Green Coolant
ဒီမော်ဒယ်စိမ်းရောင်လို့ခေါ်တဲ့ အစိမ်းရောင်ဖျော့ဖျော့ ရှိတဲ့ Coolant တွေကတော့ ရှေးအကျဆုံး Coolant တွေရဲ့ အရောင်ဖြစ်ပြီး များသောအားဖြင့် North America မှာအသုံးများဆုံး Coolant ပါ။ ဒီ Coolant တွေကို Inorganic Acid Technology လို့လူသိများပါတယ်။ ဒီအရောင် Coolant တွေမှာပါဝင်တဲ့ Silicate နဲ့ Phosphate ဓာတ်ပေါင်းတွေက Aluminium (အလူမီနီယံ) ရေတိုင်ကီတွေနဲ့ သံအင်ဂျင်တွေကို သံချေးမတက်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီ မော်ဒယ်စိမ်းရောင် Coolant တွေကိုတော့ ကီလိုမီတာ 50,000 Km ဒါမှမဟုတ်2နှစ်3နှစ်ကြာ တစ်ခါလဲလှယ်ပေးရမှာပါ။
Orange / Red / Blue / Dark Green
ဒီ လိမ္မော်ရောင်၊ အနီရောင်၊ အပြာရောင်၊ အစိမ်းရင့်ရောင် Coolant တွေဖြစ်ပြီး Organic Acid Technology အရထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးတွေမှာတော့ Silicate နဲ့ Phosphate မပါဝင်ဘဲ အခြားသံချေးတက်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်တဲ့ ဓာတ်ပေါင်းတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပြီး Coolant သက်တမ်းပိုမိုကြာရှည်အောင် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဒီ အရောင်ရှိတဲ့ Coolant တွေကိုတော့ ကီလိုမီတာ 250,000 km ဒါမှမဟုတ်5နှစ်ကနေ 10 နှစ် သက်တမ်းအထိအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဒီ အဝါရောင်နဲ့ လိမ္မော်ရောင်ရှိတဲ့ Coolant တွေကိုတော့ Hybrid Organic Acid Technology နည်းပညာတွေကို အသုံးပြုထုတ်လုပ်ထားတာပါ။ ဒီ Coolant တွေမှာတော့ Silicate ဓာတ်ပေါင်းတွေပါဝင်ပြီး အလူမီနီယံနဲ့ သတ္တုတွေချေးတက်ခြင်းကို ကာကွယ်တဲ့ ဓာတ်ပေါင်းအသစ်တွေကိုလည်း ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ Europe နဲ့ American ကားတွေမှာ အသုံးများပြီး 250,000 km ဒါမှမဟုတ်5နှစ်သက်တမ်းအသုံးပြုပြီးတိုင်း လဲလှယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ Coolant အရောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိသင့်သိထိုက်တဲ့ အချက်တွေပါ။ နောက်ထပ် Coolant တွေမှာ အရောင်တွေပါဝင်နေရတဲ့ ထူးခြားချက်က ရေယိုစိမ့်မှု ဖြစ်ပွားတဲ့အခါ အလွယ်တကူမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အခု နောက်ပိုင်း Coolant အသုံးပြုတဲ့ကားတွေမှာ ရေယိုစိမ့်မှုတွေဖြစ်တဲ့အခါ Coolant မှာပါဝင်တဲ့အရောင်တွေကြောင့် ဘယ်နားမှာ ရေယိုစိမ့်မှုတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အလွယ်တကူ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပြီး ပြုပြင်မှုတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Expansion Tank (ရေပြန်ဘူး)
Coolant တွေနဲ့ အတူ ပြောပြချင်တဲ့ အကြောင်းက Expansion Tank လို့ခေါ်တဲ့ ရေပြန်ဘူးပါ ရေတိုင်ကီနဲ့ တွဲထားတတ်ပြီး ကော်အကြည်ဘူးလေးတွေပါ။ အဲဒီဘူးလေးတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို အတိုချုပ်ပြောပြရရင် ဒီကောင်လေးတွေက ရေတိုင်ကီထဲမှာရှိတဲ့ Coolant တွေရဲ့ Pressure နဲ့ Temperature မြင့်တက်လာပြီဆိုရင် ရေတိုင်ကီအဖုံးကနေတစ်ဆင့် ဒီ ရေပြန်ဘူးထဲကို ရောက်ပြီး Pressure နဲ့ Temperature လျှော့ချပေးတာပါ။ ရေတိုင်ကီထဲမှာ Pressure နဲ့Temperature ကျသွားရင် အဲဒီရေဘူးထဲကရေတွေ ရေတိုင်ကီအဖုံးကနေတဆင့် ရေတိုင်ကီထဲပြန်ရောက်တာပါ။
ဒီရေပြန်ဘူးလို့ခေါ်တဲ့ဘူးလေးတွေမှာ Min နဲ့ Mix ဆိုတဲ့ အမှတ်လေး2ခုပါပြီး Minimum ဆိုတဲ့ အနည်းဆုံး အနေအထားရယ် Maximum ဆိုတဲ့ အများဆုံးအနေအထားရယ်ကို ဆိုလိုတာပါ။ အင်ဂျင်အေးနေတဲ့ အချိန်မှာ Coolant တွေရဲ့ Level က အဲဒီ Min နဲ့ Mix ဆိုတဲ့ အမှတ်2ခုကြားမှာရှိရမှာပါ ။ ဒါကို Coolant တွေလျော့နေတယ်ထင်ပြီး ရေထပ်ထပ်ဖြည့်ကြတာမျိုးတွေ့ရတယ်။ မဖြည့်ပါနဲ့ ခင်ဗျာ။ အင်ဂျင်အေးနေတဲ့အချိန်တိုင်းကြည့်လို့ အဲဒီအမှတ်2ခုကြားရှိတယ်ဆိုအမှန်ပါပဲ။ အင်ဂျင်ပူနေတဲ့အချိန်ဆို Max အမှတ်နားရှိနေရမှာပါ။ အင်ဂျင်အေးနေတဲ့အချိန် Coolant Level အမှတ်က Min အောက်ရောက်နေမှ ရေထပ်ဖြည့်ဖို့လိုတာပါ၊ ဒီလိုရေအမြဲတမ်းလျော့လျာ့သွားတယ်။ ရေအမြဲထပ်ဖြည့်နေရတယ်ဆို ရေယိုပေါက်တွေရှိနေတာမို့ စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။
နောက် Min နဲ့ Max ကြားပုံမှန်ရှိနေတာကို ရေလျော့တယ်ထင်ပြီး ထပ်ဖြည့်မယ်ဆိုရင် ရေတိုင်ကီထဲ အပူနဲ့ဖိအားမြင့်လာတဲ့အခါ Coolant တွေက Expansion Tank ထဲဝင်မှာမို့ ဝင်စရာ နေရာမရှိတဲ့အတွက် လျှံထွက်တာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အင်ဂျင်အအေးခံရည် Coolant ဒါမှမဟုတ် ရိုးရိုးဘုံဘိုင်ရေတွေ သင့်ကားမှာမရှိဘူးဆိုရင် ဘာတွေဖြစ်နိုင်သလဲ ဆိုရင်တော့
Dashboard ပေါ်မှာ အချက်ပြလာမယ် (ကားရဲ့ ဒက်ဘုတ်ပေါ်က ဒိုင်ခွက်ထဲက Temperature Gauge မှာ Heat တက်တာလာပြမယ်၊ တချို့ကားတွေမှာဆို Heat မီးလင်းလာမယ်)
အင်ဂျင်စက်ရပ်သွားမယ်၊ (အခုနောက်ပိုင်းမော်ဒယ်မြင့်ကားတွေမှာတော့ အင်ဂျင်အပူချိန်လွန်ကဲလာရင်၊ Heat တက်လာရင် အင်ဂျင်နဲ့ ဆက်စပ်အစိတ်အပိုင်းတွေမပျက်စီးအောင် အင်ဂျင်ကို အလိုအလျောက် ထိုးရပ်စေတဲ့ စနစ်တွေကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ဒီလိုအင်ဂျင် Heat တက်ထိုးရပ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ အင်ဂျင်အပူချိန် မကျမခြင်း စက်ပြန်နှိုးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။)
အင်ဂျင်အပူချိန် လိုအပ်တာထက်မြင့်တက်လာရင် ကားအင်ဂျင်ကို ထိုးရပ်စေမယ့် Auto Cut-Off စနစ်တွေ ကားမှာပါမလာဘူးဆိုရင် ကားမောင်းသူကလည်း အင်ဂျင် Heat တက်နေတာကို မသိဘဲ ဆက်မောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ အင်ဂျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။
အင်ဂျင်အအေးပေးတဲ့ Coolant တွေမရှိဘဲ အင်ဂျင်လည်း Heat အလွန်အကျွံတက်၊ ထိုးရပ်သွားရင် ပျက်စီးတတ်တဲ့ အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းတွေကတော့
Head Gasket (အင်ဂျင်နဲ့ အင်ဂျင်ဟက်ကြားက Gasket )
Cylinders နဲ့ Pistons တွေ
Connecting Rod တွေ
Crankshaft အစရှိတဲ့ ငွေကုန်ကြေးကျ များနိုင်တဲ့ အင်ဂျင်ပိုင်းပစ္စည်းတွေ ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင် အင်ဂျင်အအေးပေးစနစ်မှာ အရေးကြီးတဲ့ Coolant နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နားလည်သဘောပေါက်လောက်ပြီလို့ ယူဆရပါတယ်။
"Coolant မသုံးဘဲ ရေအမြဲသုံးနေတဲ့ ကားတွေ၊ ရေမသုံးချင်တော့လို့ ရေတွေအကုန် ဖောက်ချပြီး Coolant ပြောင်းသုံးတဲ့အခါ အခန့်မသင့်ရင် ရေတိုင်ကီထဲ သံချေးတက်၊ ကြေးစားတာတွေ များနေရင် မတော်တဆ ရေတိုင်ကီပေါက်တတ်ပါတယ်။ ဖြစ်ခဲပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရပြီး ဖြစ်တတ်တာမို့ ဝပ်ရှော့ဆရာများလည်း ရေအမြဲသုံးနေတဲ့ကားတွေ Coolant ပြောင်းသုံးတော့မယ်ဆိုရင် ဒါလေးကြိုတင်ပြောထားစေချင်ပါတယ်"
စာဖတ်သူမိတ်ဆွေညီကို မောင်နှမအားလုံး နည်းပညာ ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝကြပါစေခင်ဗျာ။